Inodonha kiramba H15 chakagadzirwa UV nemishonga polymer uye kwakakurudzira simbi haka.
sandara (5-8) * 2
Other Manyiminya internet inodonha waya okusungisa vari nyore kuti atore maererano zvokuimba nemishonga uye dhayamita kuti netambo 'waya remutumwa. Inodonha waya yakanyatsoti okusungisa anogona kuiswa pa akafa-mugumo, kaviri akafa-kupedza zvakarukwa waya pakutengeserana. Internet optic donhwe wire okusungisa zvakagadzirwa kunoita kukunda mumwe mutoro yakakwana pasina waya pitikoti uye kukuvadza.
Kereke dzose vakapfuura tensile nemiedzo, kushanda ruzivo pamwe tembiricha kubvira - 30 ° C kusvika +50 ° C bvunzo, tembiricha kuchovha bvunzo, kuchembera bvunzo, ngura kuramba bvunzo etc.
Previous: ACCC, ACSR Twin pamusoro kusingagumi LJS
Anchor kiramba H15
FTTH waya Fittings
FTTH kiramba H15